Xagee lagala soo bixi karaa noocyada bilaashka ah: bogagga laga helo | Abuurista khadka tooska ah
Xaqiiqdii in kabadan hal mar waxaad la kulantay bog, xayeysiis, calan ama qoraal si fudud dareenkaaga u soo jiitay, maahan wax badan oo ka mid ah waxa uu dhigay, laakiin font la adeegsaday awgood. Ama maxaa la mid ah, ilaha la adeegsaday. Haddii aadan sifiican uga warqabin sida aad u soo dejisan karto farta lacag la’aanta ah, oo ka baxsan kuwa horay loogu sii sheegay kumbuyuutarkaaga, markaa taasi adiga ayaa xiiseysa.
Waana inaad haysato qaabab wanaagsan oo xarfaha ah waxay kaa caawin kartaa naqshadahaaga hal abuurka ah. Laakiin ha u maleynin in dhammaan bilaash ah; sida muuqata way jiri doontaa goobaha laga soo dejinayo noocyada bilaashka ah, iyo kuwa kale oo ay tahay in la bixiyo. Iyo waliba noocyada farta ah ee aad u isticmaali karto dhibaato la'aan heer shakhsi iyo ganacsi; iyo kuwa kale oo aad u isticmaali karto oo keliya heer shaqsiyeed. Ma ka hadalnaa iyaga?
1 Waa maxay il?
2 Soo degso farriimaha bilaashka ah: adeegsi kasta?
3 Xagee lagala soo bixi karaa noocyada bilaashka ah?
3.1 Google Faraha
3.3 Xagee lagala soo bixi karaa noocyada bilaashka ah: 1001 Fonts Free
3.5 Halkee laga soo dejisan karaa xarfaha bilaashka ah: Font River
3.6 Aagga Font
Waa maxay il?
Fonte ayaa loola jeedaa xarfaha loo adeegsado abuurista naqshadaha. Banner ha noqoto, astaan, emayl ama xitaa buug. Xaqiiqdii, waxaad hadda aqrinaysid waxay u dhigantaa xarfaha xarfaha.
Waad la kulmi kartaa xuruuf-gooyo bilaash ah (sida kuwa kumbuyuutarada ku yimaad ama aad ku qortid Word ama barnaamijyo la mid ah); iyo ilaha lacag bixinta, halkaas oo ay tahay inaad lacag ku bixiso si aad u soo dejiso feylka kuu oggolaanaya inaad isticmaasho ishaas.
Intooda badani waxay internetka ka raadsadaan sida loo soo dejiyo noocyada bilaashka ah. Laakiin waxaa jira qodob muhiim ah oo aan lagu xisaabtamin oo dhibaato kugu abuuri kara.
Soo degso farriimaha bilaashka ah: adeegsi kasta?
Bal qiyaas laba xaaladood:
Dhinaca kale, waxaad dooneysaa inaad sameysid iskudhaf sawirrada carruurtaada ah waxaadna u baahan tahay font ku habboon si aad u siiso firfircooni dheeraad ah guud ahaan. Waxaad raadineysaa isha oo aad kala soo baxeysaa si aad ugu isticmaasho.
Dhinaca kale, waxaad u sameysaa isla isku-darka shirkad waxaadna soo dejisaa font ku habboon oo aad u isticmaashaa inaad ku soo bandhigto naqshadda.
A priori, labada kiisba way dhici karaan. Laakiin farqi yar ayaa u dhexeeya midka iyo kan kale. Halka tan hore waa adeegsi gaar ah iyo mid shaqsiyeed; kan labaadna waa mid ganacsi, meesha aad ku iibineyso shaqadaada sidaas darteedna isticmaalka ishaas. Waase macquul? Waxay kuxirantahay
Markaad soo degsaneyso farta bilaashka ah, waa inaad maskaxda ku haysaa isticmaalka aad siin doontid. Waana taas, bogagga soo degsashada bogagga, waxay kugula socodsiinayaan haddii font loo isticmaali karo ganacsi ahaan ama shaqsi ahaanba.
Adeegyo noocee ah ayaan siin karaa?
Adeegsiga shakhsi ahaaneed. Xaaladdan oo kale, waxay kuu oggolaanayaan inaad u isticmaasho font kaliya dabeecad shaqsiyeed, taas oo ah, naqshadaha aad abuurto oo aanad lacag ka qaadayn, ama aadan ka iibin kuwa kale.
Isticmaalka ganacsiga. Waxaad isticmaali kartaa font si aad u abuurto naqshado u gaar ah oo aad u iibiso go'an. Xaaladdan oo kale, fontku waa inuu caddeeyaa inuu 100% xor yahay ama in la aqbalo isticmaalka ganacsiga.
Maxaa dhacaya haddii aan qaato far shaqsiyeed oo aan u adeegsado adeeg ganacsi? Akhlaaq ahaan, waxaad sameyneysaa wax aan habooneyn in la sameeyo. Laakiin sidoo kale, haddii qoraagu taas garto, si fudud buu kuu soo sheegi karaa oo kugu qasbi karaa inaad isaga ka siiso magdhow adeegsiga aad ka sameysay ilihiisa markii la caddeeyay in aan loo adeegsan karin ganacsi ahaan.
Sidaa darteed, taladeenu waxay tahay, markasta oo aad awoodid, waxaad kaliya haysataa ilo 100% xor u ah si aadan ugu jahwareerin kuwa u adeegsanaya shaqsi ahaan iyo ganacsi ahaanba.
Xagee lagala soo bixi karaa noocyada bilaashka ah?
Ugu dambeyntiina, waxaannu kaaga tagi doonnaa hoosta bogagga aad ka soo dejisan karto noocyada bilaashka ah. Dhexdooda waxaad ku leedahay xulashooyin fara badan oo xarfaha ah, in kasta oo ay tahay inaad aad uga taxaddarto isticmaalka aad siin doontid.
Waa sidaas bogaggan waxaad ka heli kartaa noocyo kala duwan oo nooc ah, oo ka mid ah kuwa 100% bilaashka u ah kuwa kale oo aad u isticmaali karto oo keliya dhinaca shaqsiga, laakiin kuma jiraan ganacsiga. Taasi waa, inaadan u adeegsan karin inay ku daabacaan buug, boodhadh, bogga internetka ...
Sidoo kale, kuwo kale oo badan waxay u baahan yihiin ogolaanshaha dadka iyaga abuuray.
Iyadoo tan cad, bogagga aan kugula talineyno waa kuwa soo socda:
Boggan waxaad ka heli doontaa noocyo bilaash ah oo aad loo akhriyi karo oo fudud. Iyagu ma laha xarfaha "asalka ah" ama "hal abuurka", ama nooca qoraalka, laakiin qaar ka mid ah kuwan ayaa mudan in la qabto, gaar ahaan qoraallada ama cinwaannada.
Dafont waa mid ka mid ah bogagga ugu waaweyn ee laga helo warqadda waad raadineysay, xitaa haddii aadan u malaynaynin inay jiri doonto. Waana inay leedahay in ka badan 8000 nooc oo noocyada noocyada ah, in badan oo ka mid ahna waa lacag la’aan adeegsi kasta.
Xagee lagala soo bixi karaa noocyada bilaashka ah: 1001 Fonts Free
Midkii hore, 1001 Fonts Free waa mid ka mid ah boggaga ugu caansan ee loogu talagalay naqshadeeyayaasha iyo khabiirada "waraaqaha" maxaa yeelay ficil ahaan waad ka heli kartaa wax kasta oo ku jira.
Waa run in noocyada farta qaar ay la wadaagaan bogag kale, laakiin sidoo kale waxaad ka heli kartaa noocyo gaar ah oo aad jeclaan doontid.
Behance waa mid ka mid ah meelaha ay tahay inuu ogaado naqshadeeye kasta oo garaaf ah. Wayna sameysaa sidaas maxaa yeelay waa meesha naqshadeeyayaasha ay kula kulmaan khadka tooska ah. Laakiin, marka lagu daro kartida aad ku muujin kartid shaqadaada hareeraha, sidoo kale waxaa jira dad badan oo sudhan astaantooda, maxaa yeelay iyagu way qaabeeyeen; waa badan tahay, waxay kuu oggolaanayaan inaad soo dejiso iyaga badankoodna waxay shati u leeyihiin adeegsiga ganacsiga.
Maxaad tan kugula talineysaa? Hagaag, maxaa yeelay mararka qaar farta noocaas ah lagama helo meel kale waxaadna noqon kartaa asal ahaan naqshadahaaga adoo adeegsanaya hal abuur aan cid kale arag.
Halkee laga soo dejisan karaa xarfaha bilaashka ah: Font River
Font River waxaad ka heli doontaa a buugga oo loo qaybiyay mawduucyo. Sidan oo kale, farta farta ah ee aad raadinayso waxay ku salaysnaan doontaa qoraal gacmeed, khiyaali, farsamo ... Waa inaad taxaddartaa maxaa yeelay inkasta oo ay leedahay xarfo bilaash ah, haddana waxaa jira qaar la bixiyo (iyo kuwo kale oo aan oggolayn inaad u isticmaasho ujeeddooyin ganacsi).
Hubaashaani waxbadan ayuu ku xasuusinayaa Dafont, waxayna umuuqataa mid lamid ah, laakiin maahan. Waxaad heli doontaa buug-gacmeed si aad uga dhex baari karto xarfaha farta badan oo aad ka heli karto midka aad ugu jeceshahay. Laakiin, sidaan kuu sheegayno, hubi inay haystaan ​​shatiga aad u baahan tahay, gaar ahaan haddii loogu talagalay mashaariic ganacsi.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » Xagee lagala soo bixi karaa noocyada bilaashka ah
Sida loo sawiro xarfaha 3D